Gam akporo Root, olee otu iji gbanye mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba? Nkuzi ebe a! | Gam akporosis
Iji hazie sistemụ gam akporo anyị kachasị wee nweta ikike niile zoro ezo, anyị nwere ngwa sistemụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke ndị mmepe mepụtara, nke na-enye anyị ohere ịkwalite njedebe anyị kachasị, ọ bụ ezie na maka nke a, anyị ga-achọ ikikere Onye ọrụ kachasị ma ọ bụ bụrụ ndị ọrụ Root.
Gịnị bụ mgbọrọgwụ?
Mgbọrọgwụ sitere na okwu Bekee Mgbọrọgwụ y bụ okwu e ji mee ihe na Linux arụ ọrụ usoro, nke gam akporo gbadoro na ya, nke putara inwe ohere na njikwa nke faịlụ niile na folda nke sistemụ arụmọrụ ị ga - eme ma weghachite dịka anyị si chọọ. Nke a na-eji site na ngwa ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ dị iche iche anyị nwere ike ibudata na Storelọ Ahịa Play n'onwe ya, ụlọ ọrụ ngwa ngwa gam akporo.
Right ebe a na Gam akporosis Nwere ike ịchọta nkuzi nke ụdị dị iche iche iji nwee ike ịnweta ikikere echere ogologo oge Onye ọrụ kachasị ịbụ ndị ọrụ Root na-eso nke ọ bụla nke ọma zuru ezu Nkuzi na anyị kere karịsịa n'ihi na ị.
Mgbọrọgwụ na gam akporo dị egwu?
Mgbọrọgwụ na gam akporo, n'oge a Ọ bụghị ihe egwu ma ọ bụrụ na ị soro ntuziaka zuru ezu anyị na-enye gị na post ọ bụla akọwapụtara ma ọ bụ nkuzi, na agbanyeghị na e nwere ikpe nke ụlọ ikpe Europe na nghọta nke mgbọrọgwụ na gam akporo ekwesịghị ịpụta ịkagbu nke ọrụ gọọmentị maka ngwaahịa a, nke a bụ otu n'ime akụkụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwaọrụ dịka Samsung mapịa obere ma gaa n'ihu ewepu nke nkwekọrịta gọọmentị na-akpaghị aka, ọnụ ndị gbanyere mkpọrọgwụ.
Ya mere nnukwu nsogbu anyị nwere ike ihu ma ọ bụrụ na anyị ekpebie Mgbọrọgwụ anyị gam akporo, bụ ịdabere n'eziokwu ahụ bụ na n'ezie, onye nrụpụta nke ọdụ anyị ga-akwụsị nkwenye gọọmentị nke otu.
Gam akporo mgbọrọgwụ ozi
N'ime ndepụta ndị na-esonụ, anyị na-enye gị ozi ọma, ozi ọma na nkuzi ọhụụ ọhụrụ iji gbanye ngwaọrụ gam akporo gị.
Etu esi wụnye Google Play Store na Amazon Fire HD tablet ọ bụla na-enweghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ ADB
por Manuel Ramirez eme Afọ 1 .
Mbadamba mbadamba nke Amazon erewo dị ka bagels, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbadamba Chinese, ebe ọ bụ na ha malitere ...
Gam akporo 11 nwere ike inye ADB arụmọrụ na ikuku
N'ime ọnwa ndị na-eduga na mmalite nke gam akporo 10, ụmụ okorobịa na Google na-arụ ọrụ na-esote ...
[Mgbọrọgwụ] Otu esi eme ka ụda DTS 3D Stereo rụọ ọrụ na ụdị LG V30 niile
por Manuel Ramirez eme 3 afọ .
Dịka anyị kwuru ụnyaahụ, enwere ole na ole mgbe anyị chere maka ịgbanye ekwentị anyị. N'agbanyeghị…
Esi mgbọrọgwụ gam akporo
por Eder Ferreño eme 3 afọ .
Ọ bụ ezie na sistemụ arụmọrụ gam akporo na-enye anyị nnwere onwe ime ihe niile, anyị nwere ike ịchọta onwe anyị oge ụfọdụ na mgbochi ụfọdụ….
Gam akporo Oreo bụ nke abụọ kachasị eji ụdị na nkesa nkesa gam akporo ọhụrụ
Google abanyelarị nkesa data gam akporo ọhụrụ. Fọdụ data na-enyere anyị aka ịlele ọganihu ...
Esi gbanwee font nke ekwentị gam akporo gị n'enweghị mgbọrọgwụ
por Aaron Rivas eme 3 afọ .
Mgbe anyị zụrụ ekwentị gam akporo, anyị nwere ike ịchọpụta na ọ na-abịa na ndabara font ma ọ bụ typeface, nri? Bụ…
Uru na ọghọm dị na dịrị gam akporo
Ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo na-ahọrọ ịgbanye ekwentị ha. Ọ bụ nhọrọ nke ghọrọ ezigbo ewu ewu na ...
Chefuo YouTube, YouTube Vanced na-agagharị puku ugboro: enweghị mgbọrọgwụ, enweghị mgbasa ozi na enweghị ndabere
Naanị ụnyaahụ akụkọ banyere isiokwu gbara ọchịchịrị nke YouTube mebiri dị ka a ga - asị na ọ bụ ọrụ ebube si n'eluigwe n'onwe ya (na ...
Google wepu Rootless Pixel Launcher na Storelọ Ahịa Play
por Ignacio Sala eme 3 afọ .
Obere ihe na-erughị otu izu gara aga, na Ọgọstụ 29, onye ọrụ ibe m Manu gwara gị ọbịbịa nke ...
Nwere ike ibudata Rootless Pixel Launcher site na Playlọ Ahịa Google
N'ime ụbọchị ole na ole, a na-enweta Rootless Pixel Launcher site na Playlọ Ahịa Google ka ị nwee ike imelite ya ...
Pokémon Go na-egbochi ekwentị ndị nwere faịlụ metụtara mgbọrọgwụ
Ozi ọjọọ maka ndị ọrụ mgbọrọgwụ na-egwu Pokémon Go. Ebe ọ bụ na enwere ndị ọrụ amarala ọkwa na ...
Mee Xiaomi Mi A1 FM Radio rụọ ọrụ na-enweghị mgbọrọgwụ
[APK] MOD Youtube nwere ike imegharị egwu egwu, enweghị mgbasa ozi na enweghị mkpa maka mgbọrọgwụ
Mgbọrọgwụ gị Huawei P9 Lite na Nougat 7.0
Otu esi zoo mgbọrọgwụ gam akporo iji jiri ngwa egwu adabaghị na mgbọrọgwụ. (HBO, Netflix, Pokemon Go, wdg, wdg ...)
Otu esi ejikwa ma gbanwee ọkụ nke bọtịnụ nke Samsung Galaxy S7 gị, dị irè maka Galaxy na enweghị mgbọrọgwụ
Best Hack Pokemon Go enweghị Root, Android Marshmallow pụrụ iche
Iweghachite na mgbọrọgwụ na Samsung Galaxy S6 Edge Plus
Anyị enwetala mgbake na mgbọrọgwụ maka LG G3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
Esi mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S7 na S7 Edge
Mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S5 Lollipop. Nkuzi na ihe niile ị chọrọ ịma gbasara mgbọrọgwụ
Mgbọrọgwụ gam akporo: Otu esi eji KingRoot gbalịa mgbọrọgwụ gam akporo gị
Etu esi edozi Xiaomi Mi4c, Root, TWRP Recovery na Rom kpamkpam na Spanish ma dị ọcha nke ngwa
Etu esi gbanye mgbọrọgwụ gam akporo gị ọbụlagodi gam akporo Lollipop site na iji KingRoot
-Esi mee nkwado ndabere nke IMEI nke ọnụ gị dị nnọọ mfe